"ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့အတွက် ရှိသင့်တဲ့ Skill (၅) ခု"
လူတဈယောကျအတှကျ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးဆိုတာ အရမျးကိုအရေးပါပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲ ဆိုတော့ ကြှနျတျော တို့ဟာ အမွဲ တမျး ပတျဝနျးကငျြနဲ့ ထိတှဆေ့ကျဆံနရေလို့ပါပဲ။
အလုပျခှငျ၊ ကြောငျး… နောကျဆုံးကုနျကုနျပွောရငျ မိသားစု ထဲမှာ ပါ Communicationဆိုတဲ့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးကောငျးဖို့ ရာ အရမျးကိုအရေးကွီးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးကောငျးဖို့အတှကျ ဘယျလိုအရာတှလေိုအပျမလဲဆိုတာကတော့….
ကြှနျတျောတို့တှေ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ စကားပွောတဲ့အခါမှာ တဈဖကျကပွောတာကို သခြောနားထောငျပေးပါ။ သခြောနားထောငျတဲ့ အတှကျ ဘယျလိုအကြိုးကြေးဇူးရလဲဆိုတော့ တဈဖကျလူပွောသမြှကို နားလညျမယျ။ နားလညျတဲ့ အတှကျ တဈဖကျလူ ရဲ့ စိတျခံစားခကျြကိုရော သူဘာကို ဆိုလိုခငျြလဲဆိုတာရော လှယျလှယျကူကူနဲ့သိမွငျနိုငျပါတယျ။ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးကောငျးဖို့အတှကျ နားထောငျခွငျးဟာ ဘာလို့အဓိက ကနြလေဲဆိုတော့ စကားပွောနတေဲ့ သူဟာ သူပွောနတေဲ့ စကားကို နားထောငျနလေား၊ စိတျဝငျစားမှုရှိရဲ့လားဆိုတာ သိမွငျနိုငျပါတယျ။ အဲ့လိုမှ မဟုတျပဲ သူကပွောခငျြတာပွော ကိုယျက နားမထောငျဘူး စိတျမဝငျစားတဲ့ ပုံစံပေါကျနမေယျဆိုရငျတော့ သငျ့ကို respect မရှိတဲ့ လူတဈယောကျလို့မွငျသှားပါလိမျ့မယျ။ အဲ့လိုဆို သငျတို့နှဈယောကျကွား ကောငျးမှနျတဲ့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးကို ဖျောဆောငျနိုငျမှာမဟုတျပါဘူး။
(၂) Body Languages
Body languages ဆိုတာကတော့ စကားပွောနတေဲ့ အခါ..ကိုယျ့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျအနအေထား၊ မကျြနှာ အမူရာ၊ လကျလုပျရှားမှု၊ မကျြလုံး စသညျတို့ကို ဆိုလိုတာပါ။ ဥပမာ.. သငျဟာ လူတဈယောကျနဲ့ စကားပွောနတေယျဆိုကွပါစို့ စကားသာ ပွောနတေယျ မကျြလုံး ကသူ့ကို မကွညျ့ပဲ တခွားနရောတှကေို ကွညျ့ပွီးပွောနမေယျ.. ဆိုရငျ နားထောငျရတဲ့ လူအနနေဲ့ ဘဝငျမကပြါဘူး။ ဒါဆိုရငျသငျ့ အနနေဲ့ Good Communicationကိုဖျောဆောငျနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ နောကျတဈခု ကစကားပွောတဲ့ အခါ လကျဟနျပနျအမူရာကို သုံးပွီးပွောပါ။ ဒါဟာ တဈဖကျလူက သငျရဲ့ စကားပွောဆိုမှုကို ပိုပွီး စိတျဝငျစားမှုရှိစနေိုငျပါတယျ။ Salesforce ရဲ့ သုတသေန ပွုလုပျခကျြအရ Conversation တဈခုမှာ body languages ဟာ ၉၃ ရာခိုငျနှုနျးအထိအရေးပါပါတယျ။ သငျဟာ တဈကိုယျလို့ body languages ကိုသသေခြောခြာနားလညျပွီး အသုံးပွုနိုငျမယျဆိုရငျ ပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးတှဖေနျတီးနိုငျမှာပါ။
စကားပွောကောငျးခွငျးက လူတှရေဲ့ စိတျကိုဆှဲဆောငျနိုငျတဲ့တဈခုတညျးသောလမျးနညျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ လူတျောတျောမြားမြားက စကားအပွောအဆိုကောငျးတဲ့သူတှကေို ပိုပွီးသဘောကနြှဈသကျကွပါတယျ။ဒါကွောငျ့လူတှနေဲ့စကားပွောတဲ့အခါ တဈဖကျလူကိုစိတျဝငျစားဖှယျဖွဈအောငျပွောဆိုပါ။ စကားသံကွညျလငျပွတျသားမှုရှိစှာပွောဆိုပါ။တဈခါတဈ လေ ဟာသလေးတှနေဲ့လညျးအရှနျးဖောကျပေးပါ။ဒါမှလညျးကိုယျ့နဲ့စကားပွောတဲ့သူကိုပိုပွီးဆှဲဆောငျစမှောဖွဈပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ တဈယောကျယောကျနဲ့ ကွောငျးအရာ တဈခုကိုဆှေးနှေးနတောပဲဖွဈဖွဈ၊ ဒီတိုငျးပွောနတေဲ့ အခါမှာပဲ ဖွဈဖွဈ တဈဖကျလူ ပွောတဲ့ အကွောငျးအရာထဲမှာ သငျမကွိုကျတဲ့ အကွောငျးအရာ တဈခုခု ပါတယျဆိုရငျ ခကျြခငျြးမကွိုကျဘူးဆိုပွီး မတုံ့ပွနျပါနဲ့။ တဈဖကျလူစကားပွောပွီးတဲ့ အထိစောငျ့ပါ။ ပွီးခါမှ တဈဖကျလူ နားလညျလာအောငျ အကြိုးသငျ့အကွောငျးသငျ့ သခြောပွနျလညျရှငျးပွပါ။ ကိုယျ့ရဲ့ စိတျခံစားခကျြကို ထိနျးခြုပျခွငျးဟာလညျး ကောငျးမှနျတဲ့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးကိုဖျောဆောငျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
သငျအမွဲပွုံးရှငျနဖေို့လိုအပျပါတယျ။ အပွုံးဟာ လူခဈြလူခငျမြားစပေါတယျ။ လူတှသေငျ့ကိုနှဈသကျလာစပေါတယျ။ သငျဟာပွုံးရှငျနခွေငျးအားဖွငျ့ သငျဟာ ပြျောရှငျနတေယျ၊ စိတျခမျြးသာနတေယျ ၊ အကောငျးမွငျတဲ့ စိတျရှိနတေယျဆိုတာကို လူတှသေိရှိစနေိုငျပါတယျ။ ဒီအခကျြကလညျး ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးကောငျးဖို့အတှကျ အရေးပါတဲ့ အခကျြပါပဲ။
အခုဖျောပွပေးခဲ့တာတှကေတော့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးကောငျးဖို့အတှကျရှိသငျ့တဲ့ အရညျအခငျြး အခြို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖျောပွပေးတဲ့ ထဲ မှာ လိုအပျတဲ့အ ကွောငျးအရာလေးတှေ ရှိရငျ comment မှာ မနျ့ခဲ့လို့ရပါတယျ။
လူတစ်ယောက်အတွက် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဆိုတာ အရမ်းကိုအရေးပါပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် တို့ဟာ အမြဲ တမ်း ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရလို့ပါပဲ။ အလုပ်ခွင်၊ ကျောင်း… နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောရင် မိသားစု ထဲမှာ ပါ Communicationဆိုတဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ ရာ အရမ်းကိုအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့အတွက် ဘယ်လိုအရာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတာကတော့….
ကျွန်တော်တို့တွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စကားပြောတဲ့အခါမှာ တစ်ဖက်ကပြောတာကို သေချာနားထောင်ပေးပါ။ သေချာနားထောင်တဲ့ အတွက် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးရလဲဆိုတော့ တစ်ဖက်လူပြောသမျှကို နားလည်မယ်။ နားလည်တဲ့ အတွက် တစ်ဖက်လူ ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကိုရော သူဘာကို ဆိုလိုချင်လဲဆိုတာရော လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သိမြင်နိုင်ပါတယ်။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့အတွက် နားထောင်ခြင်းဟာ ဘာလို့အဓိက ကျနေလဲဆိုတော့ စကားပြောနေတဲ့ သူဟာ သူပြောနေတဲ့ စကားကို နားထောင်နေလား၊ စိတ်ဝင်စားမှုရှိရဲ့လားဆိုတာ သိမြင်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့လိုမှ မဟုတ်ပဲ သူကပြောချင်တာပြော ကိုယ်က နားမထောင်ဘူး စိတ်မဝင်စားတဲ့ ပုံစံပေါက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကို respect မရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်လို့မြင်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲ့လိုဆို သင်တို့နှစ်ယောက်ကြား ကောင်းမွန်တဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
Body languages ဆိုတာကတော့ စကားပြောနေတဲ့ အခါ..ကိုယ့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အနေအထား၊ မျက်နှာ အမူရာ၊ လက်လုပ်ရှားမှု၊ မျက်လုံး စသည်တို့ကို ဆိုလိုတာပါ။ ဥပမာ.. သင်ဟာ လူတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောနေတယ်ဆိုကြပါစို့ စကားသာ ပြောနေတယ် မျက်လုံး ကသူ့ကို မကြည့်ပဲ တခြားနေရာတွေကို ကြည့်ပြီးပြောနေမယ်.. ဆိုရင် နားထောင်ရတဲ့ လူအနေနဲ့ ဘဝင်မကျပါဘူး။ ဒါဆိုရင်သင့် အနေနဲ့ Good Communicationကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်တစ်ခု ကစကားပြောတဲ့ အခါ လက်ဟန်ပန်အမူရာကို သုံးပြီးပြောပါ။ ဒါဟာ တစ်ဖက်လူက သင်ရဲ့ စကားပြောဆိုမှုကို ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားမှုရှိစေနိုင်ပါတယ်။ Salesforce ရဲ့ သုတေသန ပြုလုပ်ချက်အရ Conversation တစ်ခုမှာ body languages ဟာ ၉၃ ရာခိုင်နှုန်းအထိအရေးပါပါတယ်။ သင်ဟာ တစ်ကိုယ်လို့ body languages ကိုသေသေချာချာနားလည်ပြီး အသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေဖန်တီးနိုင်မှာပါ။
စကားပြောကောင်းခြင်းက လူတွေရဲ့ စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောလမ်းနည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လူတော်တော်များများက စကားအပြောအဆိုကောင်းတဲ့သူတွေကို ပိုပြီးသဘောကျနှစ်သက်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါ တစ်ဖက်လူကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်အောင်ပြောဆိုပါ။ စကားသံကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိစွာပြောဆိုပါ။တစ်ခါတစ် လေ ဟာသလေးတွေနဲ့လည်းအရွှန်းဖောက်ပေးပါ။ဒါမှလည်းကိုယ့်နဲ့စကားပြောတဲ့သူကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ကြောင်းအရာ တစ်ခုကိုဆွေးနွေးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီတိုင်းပြောနေတဲ့ အခါမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တစ်ဖက်လူ ပြောတဲ့ အကြောင်းအရာထဲမှာ သင်မကြိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုခု ပါတယ်ဆိုရင် ချက်ချင်းမကြိုက်ဘူးဆိုပြီး မတုံ့ပြန်ပါနဲ့။ တစ်ဖက်လူစကားပြောပြီးတဲ့ အထိစောင့်ပါ။ ပြီးခါမှ တစ်ဖက်လူ နားလည်လာအောင် အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် သေချာပြန်လည်ရှင်းပြပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဟာလည်း ကောင်းမွန်တဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်အမြဲပြုံးရွှင်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အပြုံးဟာ လူချစ်လူခင်များစေပါတယ်။ လူတွေသင့်ကိုနှစ်သက်လာစေပါတယ်။ သင်ဟာပြုံးရွှင်နေခြင်းအားဖြင့် သင်ဟာ ပျော်ရွှင်နေတယ်၊ စိတ်ချမ်းသာနေတယ် ၊ အကောင်းမြင်တဲ့ စိတ်ရှိနေတယ်ဆိုတာကို လူတွေသိရှိစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကလည်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့အတွက် အရေးပါတဲ့ အချက်ပါပဲ။
အခုဖော်ပြပေးခဲ့တာတွေကတော့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့အတွက်ရှိသင့်တဲ့ အရည်အချင်း အချို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖော်ပြပေးတဲ့ ထဲ မှာ လိုအပ်တဲ့အ ကြောင်းအရာလေးတွေ ရှိရင် comment မှာ မန့်ခဲ့လို့ရပါတယ်။
Leader ship အကွောငျးသိခငျြတဲ့ သူမြားကွညျ့သငျ့သောရုပျရှငျ
ရဗေက်ကာ ဝတ်ထု ကောကျနုတျသုံးသပျခကျြ